Asus F201E, netbook-ka ugu horreeya ee leh Windows 8 ama Ubuntu Laga soo bilaabo Linux
Iyadoo la sii daayay kiniinno cusub iyo taleefannada casriga ah, suuqa ayaa loogu talagalay netbooks hoos ayey u dhacday iyadoo loo eegayo shuruudaha khubarada qaarkood. Haddii aad i weydiiso, waxaan ka door bidaa mid ka mid ah kumbuyuutarradan yar kumanaan jeer, a iPad ama a Samsung Galaxy S III, laakiin haye, dhadhanka ...
Arintu waxay tahay Asus wuxuu go'aansaday inuu soo bandhigo buug-gacmeed xiiso leh oo lagu baabtiisay magaca F201E, kaas oo ku imaan doona asal ahaan Windows 8 ama leh Ubuntu. Qiimayaashu waxay iila muuqdaan wax aniga iga xiiso badan, gaar ahaan qalabka ay ku jirto, iyo waxa ugu fiican oo dhan, ee noocaas ah Ubuntu waxay leedahay qiimo runti soo jiidanaysa.
Waxaan kaaga tagayaa xogta rasmiga ah inaad isbarbar dhigto:
Asus F201E-KX052H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD, Windows 8 - Black - € 329
Asus F201E-KX062H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, Windows 8 - Caddaan - 329 XNUMX
Asus F201E-KX063H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD, Windows 8 - Blue - € 329
Asus F201E-KX064H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, Windows 8 - Casaan - 329 XNUMX
Asus F201E-KX065H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Windows 8 - Madow - € 359
Asus F201E-KX066H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Windows 8 - Caddaan - 359 XNUMX
Asus F201E-KX067H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Windows 8 - Buluug - € 359
Asus F201E-KX068H: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Windows 8 - Casaan - 359 XNUMX
Asus F201E-KX066DU: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Ubuntu - Caddaan - € 299
Asus F201E-KX067DU: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Ubuntu - Buluug - € 299
Asus F201E-KX068DU: Intel Celeron 847, 1,1 GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Ubuntu - casaan - € 299
Mid ka mid ah faahfaahinta ugu xiisaha badan ayaa ah Asus sharad ku samee processor aan reerka ka tirsanayn Atom, iyo in aragti ahaan, ay tahay inay si aad uga fiican tan u shaqeyso. Netbook sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa wax soo saarka HDMI, USB3, isku xira Rj45 iyo WiFi. Waxay kaloo dhowr midab u leedahay daboolka.
Mid baan rabaa, yaa ii iibsada? xDD
source: Xusuusin Talyaani
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Asus F201E, netbook-ka ugu horreeya ee leh Windows 8 ama Ubuntu
Waxaan horey uheystey taydii (^ _ ^) prices Qiimayaal aad u wanaagsan… Aad uxun meeshii ay ku iibiyaan…
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waxaan iibsaday kaniiniga halkii aan ka iibsan lahaa laptop maxaa yeelay hal sabab ayaa ka sareysa, waxaan ubaahanahay ismaamul inta udhaxeysa 8 iyo 10 saacadood maalintii oo kaniini wey isiisaa, dhanka kale xariirka aan fiiriyey ma aysan bixin aniga dammaanaddaas.
Anigu waxaan jeclahay Lubuntu aniga sida ugu fiican ee ugu fiican, laakiin waxaan u maleynayaa in laptop-ka qiimahaas leh iyo Ubuntu uu yahay mid soo jiidasho leh.
Shakhsiyan, kaniini wuxuu kaliya iiga adeegaa akhrinta ebook, anigu waxaan ahay barnaamijye waxaanan u baahanahay inaan la qabsado shaqadayda meel kasta. Xaqiiqdii waan iibsan lahaa mid haddii aan heli lahaa lacag ama awood aan ku yeesho $ $ $ (xakamaynta sarrifka fucking).
Waa wax aad u qurux badan MacBook sax ah? Sikastaba waan jeclahay, waa inaad aragto sida wanaagsan ee uu mik-ga u shaqeynayo.
Maaha bilic "Macbook" maadaama nashqadahaasi aysan iyagu ahayn, waxay si fudud u bixiyaan hantida gaarka ah si looga faa'iideysto sawirka la yiri marka marka loo furo soo saarayaasha kale, dadka adiga oo kale ah waxay rumaysan doonaan inay yihiin nuqul! xD
Waxa saxda ah ee lagu sameeyo xaaladdan oo kale waxay noqon doontaa in la yiraahdo bilicsanaanta waxay ka timid Sony.
Ma dhihin waqti kasta oo aan aaminsanahay inay ahayd nuqul, kaliya waxaan idhi waxay leedahay muuqaal la mid ah ...
Waxaan si buuxda kuugu raacsanahay gacaliyahayga Elav, Shabakad ayaa ka doorbideysa iPad ama caqli badan. Qiimuhu ma xuma oo waxaan filayaa inay tahay bedel wanaagsan. In kasta oo aan horeyba uga yarahay 2 sano Net Net-kayga (atam) runtu waxay tahay inaan durba bilaabay inaan seego awood dheeri ah oo la xiriirta microka.
Waxa ugu fiican ee tan ku saabsan ayaa ah marka lagu daro Dell waxaan horeyba u aragnay soo saare kale oo bixiya nidaam kale oo hawlgal ah (kiiskan Ubuntu), taas oo ah qoraalka dhabta ah aniga shaqsiyan.
Sikastaba, aan rajeyno inaan aragno waxa ku dhacaya soo saarayaasha kale oo aan aragno inta dhadhan ee ay ku darayaan saxanka.
Waxba kama fahmin… sababta kuweena doorbidaya GNU / Linux aysan u helin ikhtiyaarka madow? Sikastaba, riyadu waxba ma ahan ...
Waxaan marwalba haysanaa ikhtiyaarka ah inaan qaadano qasacad saliida rinjiga ah oo aan siino gacan, sax? HAHAHA.
Sideedaba, waxay siineysaa gacan, ma ahan "gacan".
Hagaag, taasi waa isku hahaha, waad heshay fikradda 😀
Ñoooooooo weli waxaan rabaa hal… ..waa badan tahay dalabyadan waxaan u maleynayaa in Ubuntu noqon doonto mid caan ah…. Qiyaas inaad timaado dukaan oo aad aragto kala duwanaanshaha qiimaha isla sheyga… tani waxay u baahan doontaa in loo qaybiyo shirkadaha waaweyn ee qalabka sameeya….
Ku jawaab Teuton
Wan aad u fiican iyo darawal adag oo loogu talagalay netbook laakiin ... processor-ka waxoogaa yar oo la doonayo ayaa laga tagayaa, sax? Iyo nolosha batteriga?
Ganaaxa Netbook, gaar ahaan qiimaha xiisaha leh ee "bilaash" ah.
Waxaa jira xiriir toos ah oo udhaxeeya awooda processor-ka iyo nolosha batteriga, waana sababta, guud ahaan, netbook-yada loo adeegsado processor-ka Atom ama kuwa u dhigma. Way iska cadahay in booska laga heli karo qalabkani aanu ogolaanayn rakibida baytariyo awood sare leh, waana sababta ay u tahay wax aan fiicnayn in lagu rakibo matoorrada awooda sare.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin laptop yar oo cabirkiisu yar yahay iyo waxqabad sare, markaa waa inaad daruuri u booddaa ultrabook, waxaanan u maleynayaa inaynu wada ognahay waxa ay uga dhigan tahay xagga qiimaha, marka yaan la weyddiin baaraha loo yaqaan 'elm'.
Oo xaggee bay ku iibiyaan?
Waxaa lagu iibiyaa amazon, halkan waa bogga http://www.amazon.de/dp/B009NCTL24/?tag=omgubuntu-21
ama u tag OMG ubuntu si aad u hubsato http://www.omgubuntu.co.uk/2012/10/2-new-asus-new-windows-8-laptops-available-with-ubuntu
Shakhsi ahaan, waxaan arkayaa processor-ka oo aad u gaaban, processor-ka loogu talagalay laptop-ka 1.1Ghz ... ugu yaraan wuxuu ahaa ugu yaraan, ugu yaraan 1,4Ghz, aad uma xadidnaan doontid
Salaan2 .. !!
Halkan Mexico HP, iyada oo loo marayo bakhaarkiisa HP, waxay iibisaa ganacsi kala duwan iyada oo ikhtiyaar u ah win7 ama SUSE ganacsi.
Waa maxay fikradda wanaagsan ee asus, sugeysa inay aragto haddii ay gaarto Mexico. Qof baa ii sheegaya haddii ay habboon tahay in loo isticmaalo buug-gacmeedka barnaamijka, (Waxaan ku jiraa bartamaha koorsada koowaad ee isc)
Waxay kuxirantahay waxaad rabto inaad barnaamij ka dhigato, hadii aad qorsheyneyso inaad barnaamij u sameyso Android waxaan kugula talinayaa Eclipse, oo runtii ah IDE wanaagsan oo Java ah ... dhibaatadu waxay tahay inaad ubaahantahay Core i3 ama ka sareeya si aad ulashaqeyn karto dhamaan raaxada , netbook kuguma filna.
Si kastaba ha noqotee, barnaamijka barnaamijka PHP, Django, Python, Bash ama wax la mid ah mid fudud, buug-gacmeedka ayaa fiican is
qajaar la dhanaado dijo
Waa maxay qiimaha W8 ku yeelan karto suurtagalnimada isku xirnaanta shabakadaha, router, firewales, proxies, 2d, 3d, mpg, avi, mp3 software, xafiiska otomaatiga, serverka iyo maareeyayaasha keydka macluumaadka iyo isku xirnaanta ssh ... iwm 30 yuuro?
Ku jawaab pepeillo
Goorma ayaa laga sii deyn doonaa Spain? Ma waxay la joogi doontaa Ubuntu ama kaliya Windows 8?
Ku jawaab Cloud_admins
Cayaar Cayaar: Isku imaatinka kombuyuutarkaaga, bilaash iyo waliba barnaamij bilaash ah.
Ku nadiifi dukumiintiyada la marsiiyey Gimp